Ihe mere onye isi oche njem nlegharị anya nke Solomon Islands Jo Tuamoto ji enwe ezigbo nchekwube
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ihe mere onye isi oche njem nlegharị anya nke Solomon Islands Jo Tuamoto ji enwe ezigbo nchekwube
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Solomon Islands • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye isi oche ndị njem nlegharị anya Solomons, Josefa 'Jo' Tuamoto kwuru na ọ bụrụ na omume a siri ike na-aga n'ihu maka ọnwa isii fọdụrụ na afọ, na ịdebanye akwụkwọ gaa ebe a na-egosiworị na ha ga-aga, ebe a na-aga nke ọma na-akụtu ngụkọta 25,709 mebiri. na 2017.
Site na nsonaazụ dị ike nke May 2018 nke hụrụ pasent 8.21 na-arịwanye elu na nleta mba ụwa, Solomon Islands ejirila Q2 kee ụdị ya na ndị ọbịa bịara na June 2018 na-eto site na 8.0 pasent karịa otu oge ahụ n'afọ gara aga.
Onu ogugu nke Solomon Islands National Statistics Office (SINSO) weputara na egosiputa onwa May-June weputara nnabata ndi nleta nke Solomon Islands rue oge Jenuari-Juun rue 13, 317, onodu pesenti 17 kari onu ogugu 11,306 edere na 2017.
Ọbịbịa Australia maka ọnwa isii rịgoro na 4664 na-anọchi anya 35 pasent nke ngụkọta ma gbalite site na mmụba 2.48 pasent gafee June maka ọnwa ahụ.
Nnukwu mmụba gafere June ọzọ si Papua New Guinea (elu 40.5 pasent), New Zealand (17.8 pasent) na US (elu 16.1 pasent).
CEO Tuamoto kwuru na nsonaazụ Q2 siri ike na-egosi ụfọdụ ọrụ siri ike site n'aka ndị otu ya na njedebe nke 2017.
"Site na nkwado nke nkwalite anyị emeela ka ọ daa jụụ na ọkara mbụ nke 2018," ka o kwuru.
“Mana anyị nwere obi ike na mbubata anyị na-aga n’ihu n’ahịa anyị bụ isi yana profaịlụ emere site na nke ọhụrụ‘ Solomon Is. ’ rebranding na usoro uzo ohuru yiri ya ga enwe mmetụta puru iche na nleta anyi na Q3 na Q4.